Commission Scolaire Marie-Victorin (CSMV) | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Zvirongwa zvePathwayCommission Scolaire Marie-Victorin (CSMV)
Nzira yako yekuCanadaCommission Scolaire Marie-Victorin (CSMV)
Komisheni Scolaire Marie-Victorin inoumbwa nenzvimbo makumi manomwe neshanu zvinowanikwa zvikoro zvinosanganisira zvikoro, nzvimbo, nenzvimbo yekutonga.
Commission Scolaire Marie-Victorin yakagadzirwa musi waChikunguru 1, 1998, apo mabhodhi echikoro emitauro akagadzwa. Imwe yeiyo yakakura muQuebec, inoshandira vadzidzi vanopfuura zviuru makumi matanhatu, vanhu vadiki nevakuru. Iyo ine vamwe zviuru zvina mazana mana evashandi uye makumi manomwe masangano. Iyo ndeimwe yevanonyanya kukosha vashandirwi paSouth Shore.
Commission Scolaire Marie-Victorin yakapihwa zita rekuremekedza Hama Marie-Victorin.
Commission Scolaire Marie-Victorin (CSMV)Mamwe mashoko
Gadzira hunyanzvi hunodiwa kuti ushandise nzira dzakakosha kune tsika yekutengeserana yakadai sekugadzirisa matambudziko, kudzosera ruzivo uye kutonga nguva. Unyanzvi zvine chekuita nekushandiswa kwakakwana kwesoftware zvakare yakagadziridzwa: kutora mukana wemikana yekushandisa mashandiro neyekukwegura uye zvemhando matekinoroji, kushandisa mukana wekushandisa software, kugadzira nekushandisa database, uchishandisa mukana wemafoni ekukurukurirana nzira. Gadzira hunyanzvi zvine chekuita nekukurukurirana kwevashandi uye kushandira vatengi kwakadai se: kupindirana mumamiriro ezvinhu akasiyana siyana, kutaurirana muchiRungu, kupa rubatsiro rwevatengi kubva kunhare yekufona. Chekupedzisira, kuvandudza hunyanzvi hunodiwa kuti uite mabasa pamabasa ekuzvitenderedza kana kushamwaridzana necomputer: ongorora kuvaka uye kushanda kwemakomputa, gadzira chirongwa chekushandisa, gadza zvinhu zvemuviri uye zvinonzwisisika zvechishandiswa chekomputa, gonesa kuwana zviwanikwa zvemagetsi, simudza network zvekugovana zviwanikwa, dzorera kushanda kwehomputer yekushandira, simbisa mashandiro ecomputer workstation.
Wana ruzivo, hunyanzvi uye hunhu hunodiwa kuti uite basa rekugadzirira kushomesa uye musangano, kuita musangano uye wekushambadzira zvirongwa zvakakosha, zvinhu zvinoumbwa, zvirongwa zvekusimudzira zvemaindasitiri uye masimbi zvimiro zvine dhiriji dzakasiyana maitiro.
Vandudza hunyanzvi hwemabasa anodiwa kuti uite mabasa ekutengeserana, kureva: kudzivirira njodzi dzehutano uye kuchengetedzeka, kugadzirisa matambudziko esvomhu zvine chekuita nemachine pazvinhu zvechisimba uye CNC michina, kududzira zviga zvehunyanzvi, gadzira mateki ekuverenga nezviyero, kuvandudza hunyanzvi hwekuita machining zvakajairika michina zvishandiso nekuita semashop, kutendeuka, chigayo, zvinofinha uye nekuenzanisa basa pazvinhu zviri nyore, zvikamu zvakaoma uye kugadzirwa kwezvinyorwa; kukudziridza hunyanzvi hunodiwa hwekunyorwa mabhuku uye machining ezve nyore zvikamu pane lathes uye CNC machining nzvimbo; kukudziridza hunyanzvi hunodiwa kuti hushande pamwe mukudyidzana muzvikwata zvakawanda uye hunyanzvi hunodiwa kuti ubatanidze mubatanidzwa muchikoro nenzvimbo yebasa.